Igama lesiqhelo: dalbavancin (DAL ba VAN isono)
Igama lebrand: UDalvance
Iifom zedosi: umgubo efakwa ngenaliti (500 mg)
Udidi lweziyobisi: I-Glycopeptide antibiotics
By Uhlaziye ngu-Varixcare.cz ngo-Sep 21, 2020. Ibhalwe nguCerner Multum.
UDalbavancin ngu isibulali zintsholongwane elwa neebhaktiriya.
I-Dalbavancin isetyenziselwa ukunyanga izifo ezosulelayo zolusu ezibangelwa ziintsholongwane.
IDalbavancin inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo samayeza.
Xelela abo bakukhathalelayo ukuba ngaba uyatyhafisa nakuphi na ukurhawuzelela, ukurhawuzelela, iintlungu zomqolo, okanye ukufudumala ngesiquphe emzimbeni wakho ophezulu ngexesha lenaliti.
Akufanele usebenzise i-dalbavancin ukuba uxabisa kuyo.
ipilisi epinki gg 40
ukwaliwa yenye iyeza lokubulala iintsholongwane njenge vancomycin okanye telavancin.
Ayaziwa ukuba i-dalbavancin iya kulwenzakalisa usana olungekazalwa. Tshela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe.
Inikwa njani idalbavancin?
I-Dalbavancin inikwa njengokufakwa ngaphakathi emthanjeni. Umboneleli wezempilo uya kukunika le naliti.
I-Dalbavancin ihlala inikwa ngeedosi ezimbini, iveki enye ngaphandle. Ukumiliselwa ngalunye kuya kuthatha ubuncinci imizuzu engama-30 ukuyigqiba.
Ukujova eli yeza ngokukhawuleza kunokubangela ukurhawuzelela, ukurhawuzelela, irhashalala, iintlungu zomqolo, okanye ubomvu ngequbuliso okanye ukufudumala emzimbeni wakho ongasentla. Xelela abo bakukhathaleleyo ukuba unayo nayiphi na le mvakalelo ngexesha lenaliti.
Sebenzisa eli yeza ixesha elipheleleyo elimiselweyo, nokuba iimpawu zakho ziphucuka ngokukhawuleza. Ukutsiba idosi kunokunyusa umngcipheko wosulelo olunganyangekiyo kunyango. UDalbavancin akazukuyiphatha i usulelo lwentsholongwane njengomkhuhlane okanye a okubandayo Okunye .
Fowunela ugqirha wakho ngemiyalelo ukuba uphoswa lidinga lenaliti yakho ye-dalbavancin.
Kuba i-dalbavancin inikwa yingcali yezempilo kwimeko yezonyango, i-overdose ayinakulindeleka ukuba yenzeke.
Yintoni endifanele ndiyiphephe xa ndifumana i-dalbavancin?
Amayeza okubulala iintsholongwane angabangela urhudo , ezinokuba luphawu losulelo olutsha. Ukuba unorhudo olunamanzi okanye olunegazi, tsalela umnxeba ugqirha wakho ngaphambi kokusebenzisa iyeza lokurhuda.
elona xabiso liphantsi le-adderall
Iziphumo ebezingalindelekanga zeDalbavancin
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo iimpawu uxabane: imihlathi ; ukuphefumla nzima; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Biza ugqirha wakho kwangoko ukuba unentlungu ebuhlungu esiswini, urhudo olunamanzi okanye olunegazi.
Ulwazi lwedosi yeDalbavancin
I-Dose yesiqhelo yabantu abadala yoSuleleko lolusu kunye nolwakhiwo:
I-1000 mg IV, ilandelwa kwiveki enye kamva ngama-500 mg IV
Izimvo: Fakela ngaphezulu kwemizuzu engama-30.
Ukusetyenziswa: Unyango lwezigulana zabantu abadala ezinesifo esibukhali sebacteria kunye nolusu lolusu (ABSSSI) ezibangelwa kukuzibandakanya kwezi zintsholongwane zilandelayo: Iqela le-anginosus (kubandakanya S. anginosus, S. intermedius, S. constellatus).
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-dalbavancin?
Amanye amachiza anokuchaphazela i-dalbavancin, kubandakanya amayeza kunye namayeza e-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akhoyo kunye nalo naliphi na iyeza oqala okanye uyeke ukulisebenzisa.
ipilisi emhlophe r 35
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 2.01.
iziphumo ebezingalindelekanga zesulfameth trimethoprim
I-tylenol kunye ne-ibuprofen kunye kunye nentlungu
uvavanyo lokukhulelwa luyasebenza
ingakanani i-hydrocodone ngaphandle kwe-inshurensi